Xa abantwana beza esikolweni esiphakeme kwaye amabakala ngokwenene athetha into ethile, abafundi baqala ukubuza imibuzo ootitshala abaye basebenzayo kuba besesikolweni samabanga aphantsi. Imihlathi efana ne " amanqaku alinganisiweyo " kunye " nokubamba kwinqanaba ", elaliqhele ukuthetha nje ngutitshala, ngoku iyakuthi iphendulwe kuba loo GPA ibaluleke kakhulu kwibanga lesi-9 nangaphezulu! Omnye umbuzo uthisha ubuzwa ngokubanzi, "Yintoni i rubrikhi?" Ootitshala bawasebenzisa ezininzi kwiklasi, kodwa abafundi bafuna ukwazi indlela asetyenziswa ngayo, indlela abanokubanceda ngayo amabakala abafundi, kwaye ziziphi iintlobo zokulindela eziza nazo.
I-rubrikhi kuphela iphepha elivumela abafundi ukuba bazi izinto ezilandelayo malunga nesabelo:
Ukulindela ngokubanzi isabelo
Iikhrayitheriya, ezilungiselelwe kumgangatho wekhwalithi ukusuka kumgangatho ophezulu ukuya kumahlwempu, ukuba umfundi kufuneka adibane
Amanqaku okanye amabakala umfundi angayifumana ngokusekelwe kumanqanaba
Kutheni Abafundisi Basebenzisa AmaRubrics?
Iibrubrikhi zisetyenziselwa izizathu ezimbalwa ezahlukeneyo. Iibrarikhi zivumela ootitshala ukuba bavavanye izabelo ezifana neeprojekthi, iincwadana kunye nomsebenzi weqela apho kungekho "iimpendulo ezilungileyo okanye ezingalunganga". Baye bancedise izabelo zetitshala kunye neenxalenye ezininzi njengeprojekthi eneentetho, isahlulo senxalenye kunye nomsebenzi weqela. Kulula ukucacisa ukuba "i-A" ikuphi uvavanyo olukhethiweyo, kodwa kunzima kakhulu ukufumanisa ukuba "A" yiprojekthi eneenkalo ezininzi. I-rubrik inceda abafundi kunye notitshala ukuba bazi kakuhle apho bazokubeka umgca kwaye banike amaphuzu.
Xa Abafundi bafumana iRubric?
Ngokuqhelekileyo, ukuba utitshala uyaphuma irubrikhi yokubamba (okufuneka ayenze), umfundi uya kufumana irubrikhi xa isabelo sinikezelwa. Ngokuqhelekileyo, utitshala uza kuhlola kwakhona zombini isabelo kunye nerubrikhi, ngoko abafundi bayazi iindidi zeendlela ezifunekayo ezifunekayo kwaye banokubuza imibuzo xa kuyimfuneko.
* Qaphela: Ukuba ufumene iprojekthi, kodwa ungazi ukuba uza kufakwa njani kuyo, cela uthisha wakho ukuba unokufumana ikopi yerubrikhi ukuze ukwazi ukumahluko phakathi kwamabanga.
AmaRubrics asebenza njani?
Ekubeni iibrarikhi zinikela ngokucacileyo inkcazo yesabelo, uya kuhlala uyazi ukuba yeyiphi ibakala oyifumanayo kule projekthi. Iirubrikhi ezilula zikunokukunika ibakala leencwadi kunye neyezinto ezimbini okanye ezibini ezidweliswe kwinqanaba ngalinye.
A: Ukudibanisa zonke iimfuno zesabelo
B: Ukudibanisa iimfuno zesabelo
C: Ukudibanisa ezinye iimfuno zesabelo
D: Ukudibana neemfuno ezimbalwa zesabelo
UF: Akujongani na iimfuno zesabelo
Iirubrikhi eziphambili ziza kuba neendlela zokuhlola. Ingezantsi "Inxalenye Yemithombo" inxalenye yerubrikhi evela kwisabelo somaphepha wophando, ocacileyo ngakumbi.
Uphando ulwazi oluchanekileyo
Unelisekile lwangaphandle kwenkcazelo ukumela ngokucacileyo inkqubo yophando
Ukubonisa ukusetyenziswa kweengcamango, ukucaphula nokucaphula
Iinkcukacha zixhasa i -sissis ngokufanayo
Imithombo YemiSebenzi Ekhankanywe ngokuchanekileyo kwimithombo echazwe kwimiyalezo
Ngayinye yeendlela ezichazwe apha ngasentla zifaneleke naphi na kwi-1 - 4 amanqaku asekelwe kulo mlinganiselo:
4-Kusobala iprogram yolwazi, oluqhelekileyo
Ubungqina obu-3 bombutho ophuhlisayo
2-Okungekho sikweni, okungahleliwe, ukungafani
1-Isicelo sekhono esingavumelekanga
Ngoko ke, xa utitshala ephawula iphepha kwaye ubona ukuba umfundi ubonise izinga elingenakuhambelanayo okanye elingenangqiqo yekhrayitheriya ye-criteria # 1, "Uphando ulwazi oluchanekileyo olubhalwe ngokufanelekileyo," uya kunika le ngongoma yebhokhwe 2 ngaleyo ndlela. Emva koko, uya kuhamba kwiinkqubo ze-# 2 ukuqinisekisa ukuba ngaba umfundi unelungelo elingaphandle lwangaphandle ukumela inkqubo yophando. Ukuba umfundi wayenomthombo omkhulu wemithombo, umntwana uya kufumana amanqaku amane. Kwaye nangokunjalo. Le ngxenye yerubrikhi ibonisa iikhompta ezingama-20 ezingenako ukufumana kwiphepha lophando ; ezinye iingxelo zee-80% eziseleyo.
Khangela olu uluhlu lwemibutho yeerubriki ukusuka kwiYunivesithi yaseCarnegie Mellon kwiiprojekthi ezahlukeneyo.
Iphepha lefilosofi Le rubriki yenzelwe amaphepha abafundi kwizifundo zefilosofi kwi-CMU.
Ukuhlolwa komlomo Le rubriki ichaza imilinganiselo yemigangatho yokuhlola ukusebenza kwimeko yokuhlolwa komlomo kwinqanaba eliphambili lembali.
Iprojekti yoKwakha yobunjineli Le rubriki ichaza imilinganiselo yokusebenza kwimimiselo emithathu yeprojekthi yeqela: uPhando kunye noKwakha, uLonxibelelwano kunye noMsebenzi weQela.
Ukuba nokulindela okucacileyo kukuhle kubo bobabini ootitshala nabafundi. Ootitshala banendlela ecacileyo yokuvavanya umsebenzi wabafundi kunye nabafundi bazi kakuhle ukuba zeziphi izinto eziza kubafumana ebangeni abafunayo.
Ngaba Ufuna Ukuba Ushushu? Emva koko Bhukuda Ngokuqhelekileyo!
Amasiko aseJamani aseJamani
Iingcebiso zokucoceka nokukhupha ii-Stains ezivela kwi-Shoes Pointe
Ukulahlekelwa nguBawo-Intombi ibonakalisa ukufa komzali